Photoshop Express Online Maimaim-Poana
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Photoshop Express -Tserasera
Ity mpamoaka lahatsoratra ity dia safidy hafa maimaimpoana amin'ny Adobe Photoshop Express izay hanampy anao hanatanteraka ny fanodikodinam-sary rehetra ilaina amin'ny Internet. Ny tonian-dahatsoratra dia manolotra fanampiana RAW, plug-in ary sosona azo ovaina. Azonao atao ny mamorona lamina isan-karazany ary manisy sary amin'ny borosy mahazatra aza. Andramo ity mpampanonta ity alohan'ny hisintomana ny Adobe Photoshop Express an-tserasera.
Ity ve ny kinova feno an'ny Photoshop Express an-tserasera?
Tsia, tsy ny editeran'ny Photoshop Express no feno. Natao ho an'ny vao manomboka izy io ary manolotra teknika sarotra amin'ny endrika tsotra.
Saika ny teknikan'ny fanovana sary rehetra toa ny fanesorana ny maso mena, ny fanadiovan-nify, ny fanesorana ny mony ary ny fanitsiana ny loko, dia tanterahina amin'ny maody semi-automatique, miaraka amin'ny fahaizana manao fanitsiana lalindalina amin'ny fampiasana sosona.
Manana ny plugin RAW Camera ve ity Photoshop Express an-tserasera ity?
Tsia, ity Photoshop Express amin'ny Internet ity dia tsy manome plugin Adobe RAW plugin. Saingy mbola afaka manao fanitsiana loko ianao amin'ny alàlan'ny sivana, tsipika ary loko hafa ao amin'ny fizarana Image → Adjustments.
Azoko atao ve ny manafatra sy mampiasa plugins eto?
Eny, ity mpamoaka lahatsoratra ity dia manohana plugins Photoshop Express, ao anatin'izany ny Maimaim-Poana Photoshop Actions, ny Maimaim-Poana Photoshop Overlay, ny Photoshop Brushes ary ny Photoshop Maimaim-Poana Texture.
Ampy ve ny fitaovana hanaovana retouching avo lenta?
Azonao atao ny manosotra ny hoditra, manafoana ny kilema amin'ny maso mena, manafotsy ny nify, manala ny ambadika ary manala ny volo very aza. Fa raha manomana sary avo lenta hanontana ianao, dia tsy ho ampy ny fiasan'ity safidy Photoshop Express an-tserasera ity. Amin'ity tranga ity, mamporisika anao izahay hanantona serivisy famerenana sary matihanina.